Aarthik Abhiyan:प्रदेश ०३
७५ जना व्यवसायीको सामूहिक लगानीमा चितवनमा कविलास रिसोर्ट
साउन २४, चितवन । तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको कविलासको डाँडामा आधुनिक प्रविधिको फनपार्कसहितको रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न ७५ जना व्यवसायीको सामूहिक लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा ‘कविलास रिसोर्ट एण्ड फन पार्क’...
लामोसाँघु–सिँगटी प्रसारण लाइनको ८६% प्रगति
नवराज शिवाकोटी दोलखा । लामोसाँघु सिँगटी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विभिन्न कारणले लामो समयसम्म अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनामा पछिल्लो समय सन्तोषजनक रूपमा काम अघि बढेको हो । हालसम्म आयोजनाका कुल १२५ मध्ये ८० ओटा टावर बनिसकेको र १३ किलोमिटर तार तान्ने काम भइ...
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम :चितवनमा सवा करोड फ्रिज
चितवन (अस) । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा रू. १ करोड १८ लाख ५६ हजार फ्रिज भएको छ । जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तहमा काम हुन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता गएको हो । गत आव यो कार्यक्रमका लागि जिल्लामा रू. २ करोड ४० लाख ७२ हजार आएको थियो । सरकारले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवको...
प्यान लिनेको संख्यामा वृद्धि, के हो प्यान नम्बर ?
साउन २३, बनेपा । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलबाट दुई महीनाको अवधिमा ६ हजार २८३ जनाले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र भ्याट प्रमाणपत्र लिएका छन् । व्यक्तिगत रुपमा पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक रुपमा गरिएका अर्थ उपार्जनका गतिविधिहरुको विवरण चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि सरकारले जेठ १५ ग...
गोसाइँकुण्ड जाने २ ओटा पदमार्ग सञ्चालनमा
साउन २२, बेत्रावती(नुवाकोट) । गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमाका अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुन नुवाकोट हुँदै जाने अर्को पदमार्ग पनि व्यवस्थित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काठमाडौंको सुन्दरीजल र नुवाकोटको समुन्द्रटार हुँदै जाने सो पदमार्ग सुधार गरिएको हो । साथै रसुवाको धुञ्चे हुँदै जाने मुख्य पदमार्ग प...
सुर्यविनायकमा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल निर्माण हुँदै
साउन २२, भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिकामा उपत्यकाकै लामो झोलुंगे पुल निर्माण हुने भएको छ । डोलिडारको रू.१ करोडको लगानीमा आगामी सात महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सूर्यविनायक नगरपालिका–९ नंखेल र वडा नं १० चित्तपोल जोड्ने उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल निर्माण हुने भएको हो ।...
खानेपानी उपभोक्तालाई २ करोड ऋण !
साउन २२, काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिका कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई रू.२ करोडको ऋणी बनाइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पाँचखालका करीब २० प्रतिशत परिवारलाई सहकारीमा ऋणी बनाएर नगरमा सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । &nb...
१२ तले मेट्रो प्लाजा बनाउँदै भरतपुर महानगर
सूर्यप्रसाद अधिकारी चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणगढ बजारमा ‘भरतपुर मेट्रो प्लाजा’ बनाउने भएको छ । कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकअनुसार महानगरपालिकाले यसको निर्माण सम्झौता लगायत काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । १२ तले उक्त प्लाजाको लागत इस्टिमेटको जिम्मेवारी अरनिको डिजाइनर्स एन्ड प्ल...
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : चितवनमा सवा करोड फ्रिज
सूर्यप्रसाद अधिकारी चितवन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा रू. १ करोड १८ लाख ५६ हजार फ्रिज भएको छ । जिल्लामा रहेका सात स्थानीय तहमा काम हुन नसक्दा उक्त रकम फिर्ता गएको हो । गत आव यो कार्यक्रमका लागि जिल्लामा रू. २ करोड ४० लाख ७२ हजार आएको थियो । सरकारले रोजगार कार्यक्रम स...
दोलखा मालपोतले उठायो ५ करोड राजस्व
दोलखा (अस) । जिल्ला मालपोत कार्यालय, दोलखाले गत आवमा करीब ५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले सो अवधिमा १२ ओटा शीर्षकमा रू. ४ करोड ८५ लाख १२ हजार राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले राजीनामा पासबाट सबैभन्दा बढी रू. ३ करोड १२ लाख ८७ हजार असुली गरेको छ । यस्तै दर्ताफारी, सगोलनामा, लाभकर र धर्मप...
समुदायको अगुवाइमा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुल्हो
तिनाउ मिसन र नेपाल कम्युनिटी मर्जर प्रक्रियामा
स्थापना दिवसमा शारदा ग्रूपको रक्तदान
नाडा शोमा ४ गाडी प्रदर्शन गर्दै महिन्द्रा